Ikanam OT ìhè
Ọkụ dị jụụ iji mee ka ụwa bụrụ ebe ka mma
Innovation, ùgwù, mmeri-mmeri, ibu ọrụ, ekele. Mee mma ọkụ ahụike
Nanchang Micare Medical Equipment Co., LTD bụ ụlọ ọrụ ọhụụ na teknụzụ dị elu, anyị nọ na Nanchang National High-Tech Development Mpaghara. Anyị na-elekwasị anya na mmepe na ịmepụta ọkụ ọkụ. Ngwaahịa anyị ndị isi na-ekpuchi ịwa ahụ na-arụ ọrụ, nyocha nyocha ọgwụ na ọkụ ihu igwe, wdg. Onye isi na ụlọ ọrụ nke ọkụ ọkụ. Akwụkwọ enwetara nwere ISO13485, CE, akwụkwọ asambodo n'efu na ihe ndị ọzọ.
Micare raara onwe ya nye inye ndi oru ulo oru ogwu nile, odi nma ma di nma ma nwee obi uto, jiri ihe omuma ohuru ohuru na ihe omumu, ihe omuma nke ndi ogwu, na ihe ohuru na-aga n'ihu, iji meputa ahihia na ike, nchekwa ma mepụta uru ka ukwuu maka mmepe mmekọrịta mmadụ na ibe ya.
Companylọ ọrụ a nwere ndị otu ndị ọrụ tozuru etozu. Anyị na-elekwasị anya na ọrụ echiche nke iguzosi ike n'ezi ihe, ọkachamara na ọrụ. Na mgbakwunye, ụkpụrụ anyị bụ ime ka ndị ahịa nwee afọ ojuju, nke a na-ewere dị ka ihe ndabere maka nlanarị. Anyị raara onwe anyị nye maka mmepe nke ụlọ ọrụ anyị na ọrụ ọrụ ọkụ. Banyere ngwaahịa, anyị na-enye oke mma nkwa ndị ahịa anyị na-ekwe nkwa iji ruo ụkpụrụ anyị nke ndị ahịa gbadoro ụkwụ na nke mbụ. Ka ọ dị ugbu a, anyị nwere ekele maka ndị ahịa ọhụrụ anyị na ndị ahịa anyị tụkwasịrị obi na ngwaahịa anyị. Anyị ga-emewanye ngwaahịa na ọrụ anyị dị ugbu a, wee weghara usoro ọhụụ nke mmepe teknụzụ na ndabere a. Anyị ga-etinye ọhụụ ọhụụ nke ọhụụ maka ihe ọhụrụ iji nye ngwaahịa na ọrụ ndị ka mma ndị ọrụ anyị. Micare tumadi na-amị ịwa ahụ ndo oriọna, ịwa ahụ inyeaka ọkụ, ọgwụ isi oriọna, ọgwụ na-etokwa iko, ọgwụ oyi na-atụ ìhè isi na ndị ọzọ iche.
Na June 2011
Na June 2011, Micare e chie wee guzosie ike ma a Medical ịwa ahụ Light emeputa na Jiangxi Province.
Na 2014, n'ozuzu reflective ikanam ịwa ahụ Light merie nke abụọ na-agbata n'ọsọ nke Jiangxi Magburu onwe New Product.
Site na 2015 rue ugbu a
Site na 2015 ruo ugbu a, ụlọ ọrụ ahụ nwere isi ngwaahịa dị ka ọkụ ịwa ahụ ahụike, oriọna nyocha ahụike, isi mmalite ọkụ ọkụ, isi ọkụ ahụike, wdg, ma soro ọtụtụ ụlọ ọgwụ rụkọọ ọrụ iji gbasaa ahịa ụlọ na nke mba ọzọ, ma sonye n'ọtụtụ dị iche iche ihe ngosi ahụike na ụlọ na mba ofesi ọtụtụ oge wee merie otuto sitere na ndị ahịa.
mgbidi ugwu ule ìhè, Eze oriọna, Ọmụma Ule Ọgwụ, Ikanam ịwa ahụ Headlight, Halogen Oriọna Maka Biochemical Analyzer, Halogen Examination Oriọna,